The Dior Fairy Tale: ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စုဆောင်းခြင်း | ဗွီဒီယို• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း မိတ်ကပ် The Dior Fairy Tale: ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စုဆောင်းခြင်း | ဗွီဒီယို
| Watch Video on
စုဆောင်းမှုအသစ်၏တင်ပြချက် Haute couture di ခရစ်ယာန် Dior ဒါတကယ့်တစ်ခုပါ ပုံပြင် ခေါင်းစဉ်တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်မှတဆင့်တင်ပြခဲ့သည် Le Myth Dior ကစီစဥ်ညွှန်ကြားသည် Matteo Garrone ။
Credit: © LESLIEMOQUIN
အဆိုပါရုပ်ရှင်မှော်သောနေရာများအတွက်ဖြစ်ပျက်, ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်သစ်တောများ၊ ရေကန်များ၊ ဒဏ္myာရီရှုခင်းများကိုလှပသောလူများနေထိုင်ကြသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သတ္တဝါများ, ဘယ် မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း, သစ်သား nymphs, Fairy သူတို့မကြာမီသေးငယ်ခြင်းနှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားပြသခဲ့သည်အဖြစ်စပ်စုဖြစ်လာသူကို သေးသေးလေးမြင့်ဖက်ရှင်ဆင်မြန်း, ဒီဇိုင်းဆင်မြန်း မာရီယာ Grazia Chiuri ။
Credit © LESLIEMOQUIN
ခမ်းနားထည်ဝါသောသတ္တဝါများအားပြသသည့်အဝတ်များသည်သမိုင်းဝင်နေရာကိုလှုပ်စေသောစည်တစ်ခုအတွင်းရှိသည် atelier ၏ in ရိပ်သာလမ်း Montaigne ။ အဆိုပါ သေးသေးလေးဆင်မြန်း ၎င်းတို့ကိုဟိုတယ်အိတ်များကိုင်တွယ်သူများ၏ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောကြော့လူငယ်နှစ် ဦး ၏ပခုံးပေါ်တင်ဆောင်ထားသည်။ အပေါ်ကဗီဒီယိုမှာ ၎င်းအတွက်သီးသန့်ဖန်တီးထားသောနူးညံ့သောလေထုများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအသံများကိုနားလည်နိုင်သည်Haute couture ကျဆုံးခြင်း / ဆောင်းရာသီ 2020-2021 di ခရစ်ယာန် Dior
ဆောင်းပါး The Dior Fairy Tale: ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စုဆောင်းခြင်း | ဗွီဒီယို မှ အလှအပ၏ဂျာနယ်.
ယခင်ဆောင်းပါးDua Lipa နှင့် Anwar တို့သည် USA သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်
နောက်ဆောင်းပါးBillie Eilish သည် Justin Bieber ပန်ကာဖြစ်သည်
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူ။ နှစ်ပေါင်းများစွာမှန်ကန်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်၎င်း၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အလှအပလောကနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထက်သန်သူမကသူမအနေဖြင့်ဤကဏ္ to သို့သူမ၏အတွေ့အကြုံများယူဆောင်လာရန်အမြဲတမ်းကတိက ၀ တ်ပြုသည်။
ချောကလိတ် ... အသည်းကွဲခြင်း
PABLO ARDIZZONE မှကြယ်တို့၏ပုံရိပ်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ...
ငါ Professional Lash လုပ်သူဖြစ်ချင်: ဘယ်လို?
အောက်တိုဘာလ 15, 2019
5ပြီလ 2018, XNUMX